को हुन टिकटकमा अत्यधिक चर्चित बनेका अफ्रिकन खाबी लेम? - टि. एल. एन पोस्ट
Home समाचार को हुन टिकटकमा अत्यधिक चर्चित बनेका अफ्रिकन खाबी लेम?
को हुन टिकटकमा अत्यधिक चर्चित बनेका अफ्रिकन खाबी लेम?
पश्चिम अफ्रिकाको खाबी लेम टिकटकमा सबैभन्दा चर्चित व्यक्तिको सूचीको दोस्रो स्थानमा छ । उनी चार्ली डीुअमेलियोपछि दोस्रो स्थानमा छन्।
२१ वर्षका लेमको टिकटकलाई ९० करोडभन्दा बढी व्यक्तिले फलो गर्छन् भने एक अर्ब ३० करोडले लाइक गरेका छन् ।
बीबीसीका अनुसार धेरैले लेमले अमेरिकी नृत्याङ्गना डीुअमेलियोलाई पनि उछिन्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। डीुअमेलियो टिकटकमा एक अर्ब फलोअर पुर्‍याएर पहिलो स्थान हासिल गर्ने व्यक्ति हुन्। उनको हाल एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी फलोअर छन्।
लेम हाल इटलीमा बस्छन्। उनी एउटा कारखानामा मजदुरका रूपमा काम गर्ने । उनले कोभिड महामारीका कारण जागिर गुमाएपछि मार्च २०२० मा टिकटक चलाउन सुरु गरेका थिए। उनी रमाइला भिडिओहरू बनाएर अन्य मानिसले कसरी सहजै हुने कुरालाई बिनाकारण जटिल बनाएका छन् भनेर देखाउँछन्। तर भिडिओमा उनी बोल्दैनन्।
लेमका अनुसार उनको अनुहारको नाटकीय भावभङ्गि देखेर मानिसहरूलाई रमाइलो मान्छन् अनि त्यो रमाइलो भएको कुरा थाहा पाउन कुनै भाषा जान्नुपर्दैन। उनी फुटबल खुब हेर्छन् र कतिपय भिडिओमा फुटबल जर्सी लगाउँछन्। उनले आफू चलचित्रकर्मी इडी मर्फी र विल स्मिथबाट उत्प्रेरित भएको बताएका छन् ।
Previous articleतनहुँको अकला मन्दिरमा मूर्ति चोरी
Next articleकस्तो छ आजको मौसम ? कहाँ कहाँ पानी पर्ने संभावना ?
के हो ‘स्मार्ट लकडाउन’? के हुन्छ यो ‘स्मार्ट लकडाउनमा’? लागु गर्ने तयारी कस्तो छ?
जसपाको महन्थ पक्ष ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा जाने
चन्द्रागिरी हिल्सको वित्तीय विवरण सार्वजनिक, निरन्तर नोक्सानी व्यहोर्दै